ENUGWU: LEKWANỤ HEDIMASITA NRỤNYE AKA N’IKE ỤMỤAKA!!! – hoo!haa!!
Aka ndi uwe ojii steeti Enugwu akparala otu onye isi ụlọ akwụkwụ nke aha ya bụ Natanel Idoko, n’ihi na ọ na-emebi ụmụaka ụmụ nwanyị ndi ụlọ akwụkwọ ya.
Idoko bụ onye gbara afọ iri ise bụ onye Mkpamteulọ Enugwu Ezike n’okpuru ọchịchị ime obodo mgbago ugwu Igboeze na steeti Enugwu ma bụrụkwa onye isi ụlọ akwụkwọ akpọrọ ” Migrant Farmers Children School” nke dị n’Agụibeji, Enugwu Ezike.
E kwuru na, ka ọnwa Julai nke afọ a dị n’abalị iri na asaa ka nwoke a kporo ụmụ aka ụlọ akwụkwọ ya dị anọ n’ọnụ ọgụgụ baa ime ọhịa. E kwuru na ụmụaka ndi a dị n’agbata afọ anọ nakwa afọ ise. Mgbe o kpobara ụmụaka a n’ime ọhịa, ọ malitere kpasowa ha agwa dịka nkịta.
N’ozi ndi uwe ojii weputara n’Enugwu, ka e kwuru na nwoke a mere mpụ a mgbe agụm akwụkwọ na-aga n’ihu. Ha kwuru na nwoke a bụ Idoko were mkpịsị aka ya na-arụnye n’ime ike ụmụaka ahụ nke butere ha mmerụ ahụ n’ime ahụ ha. N’ihi ya ụmụ aka a malitere gawa ije dịka ndi ụkwụ na-egbu mgbu.
Ọnụ na-ekwuru ndi uwe ojii na steeti Enugwu bụ Ebere Amaraizu kwuru na akparama-agwa nwoke a pụtara ihe mgbe otu onye n’ime ụmụaka ahụ kọwara nne na nna ya ihe mere.
Ọ sị na ọbụ nke a mere aka ji kpara “hedimasita-nrụnye-aka a”. Ozi a kwuru na nwoke a gosiri nnwute ya maka ihe omere ma kwue na ọbụ Ekwensu dubara ya ime nke a. Nwoke a kwuru na ya amaghị ihe kpatara ya ịkpa ụdị nkanka agwa dị otu a, ebe ọ bụ na onweghi uru ya ritere n’ihe ya mere.
Amaraizu kwuru na nwoke a bụkwa onye lụrụ nwanyị na-ayọzị ayịyọ maka mgbaghara. Mgbe ajụrụ nwoke a, ma ọ na-emebụ ụdị ihe a, ọ zara, na nke a bụ izizi ya na-akpa ụdị agwa a, ma kwukwa na onweghị ihe ya bu n’uche mee ihe ya mere.
Ụmụ aka anọ ndi a ihe a metụtara ka e kwuru na ha nọzị n’ụlọ ọgwụ ndi uwe ojii Enugwu, bụ ebe ana-enye ha ọgwụ. Ndi uwe ojii na-agakwa n’ihu, ịma imi n’ala maka ịmara ka mmiri siri baa akụ oyibo ime. Ndi uwe ojii kwuru na ozigbo ha mechara nchọpụta ha, na ha ga-akpụga nkịta a tara ọkpụkpụ anyawara ya n’olu, ụlọ ikpe.
Previous Post: ỌKWA MMADỤ NWE ỌGỌDỌ EWU NA-ATA? ỤLỌ A GA-ASỤGBUKWA MMADỤ!
Next Post: LỌKPANTA:ỤGBỌ EHI ADỌCHIELA ỌZỤ AWARA AWARA